जीवन सफल बनाउन भाषामा गंभीर हुनुपर्छ
भिम उपाध्याय, उपाध्याय
सहरी युवामा अंग्रेजीको नकारात्मक क्रेज र कुप्रभावले गर्दा नेपाली भाषा कमजोर हुदैछ । पहाडी गाउँका युवामा अंग्रेजी भाषा कमजोर छ । तराईबासी युवामा नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषा कमजोर छ । नेपाली हुनु भनेको कम्तिमा नेपाली भाषा कमजोर हुनु हुदैन । बरू पछि अंग्रेजी सुधार्न सकिन्छ तर नेपाली भाषा कमजोर भयो भने जीवनमा हण्डर खाईन्छ ।
नेपाल अहिले बायलिंगुअल मुलुक भैसक्यो, विदेशी सहयोगका प्रोजेक्टका कारण नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा सरकारी कामकाज नगरी सुख छैन, दुबै राम्रो हुनैपर्छ । बहुभाषिक मुलुक भएकोले अन्य नेपालका भाषा पनि सबैले राम्रो बनाउदै लग्नैपर्छ । सहरी युवा र तराईका युवाको तुलनामा पहाडका युवाको हातमा मुलुकको शासन वा प्रशासन पुग्नुको खास कारण भाषामा दख्खल पनि एक हो ।
तराईमा न नेपाली, न अंग्रेजी, न हिंदी भाषा राम्रो रहेको पाईन्छ । यसरी त शासन प्रशासनमा पस्न तराईबासी युवालाई विस्तारै कठीन हुदै जाने र पसे पनि सहज सफल हुन नसक्ने संभावना रहिरहन्छ । अरू भाषा समेत नभए पनि न्युनतम् नेपाली र अंग्रेजी त सबैले राम्रो बनाउनै पर्छ है ! नेपालमा सत्तामा रहन वा चलाउने चाहना छ भने !
युरोपमा अंग्रेजी जस्तै नेपालमा सयकडौं वर्ष देखि प्रचलन र सम्पर्क भाषामा निरन्तर बिकसित हुदै आएको नेपाली भाषा अहिले नेपालको मात्र भाषा हैन, ७० देशमा यो फैलिएको छ । यसलाई केही देश भारत, अमेरिका लगायतले अफिसियल भाषाको दर्जा पनि दिईसकेका छन् । नेपाली भाषाको जननी संस्कृत भाषा भएका कारण जसले नेपाली भाषा जानेको छ, उसले संस्कृत जननी भएको अधिकांश भाषा सहजै बुझ्न सक्ने र सिक्न सक्ने क्षमता पनि स्वत ः राखेको हुन्छ । नेपाली जान्नेलाई हिन्दी, उर्दू, मैथिली, अवधि, पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, असमी बुझ्न त्यति कठिन हुदैन । त्यस्तै जापानी भाषा सिक्न पनि नेपाली जान्नेलाई धेरै सजिलो हुन्छ ।
संस्कृत शब्द भाषा कसैबाट बनाइएको हैन, खोज गरिएको हो–संस्कृतमा हरेक आकृति वा वस्तुका निम्ति अलग्गै ध्वनि हुन्छ । संस्कृतको सही उच्चारण गर्दा मात्र आकृति अभिव्यक्त हुन्छ । संस्कृतमा लेखिएका मन्त्रहरू नबुझे पनि फरक पर्दैन, तर तिनको उच्चारण सही गरिएको हुनुपर्छ । सबै वस्तु र आकारका अलग–अलग ध्वनि हुन्छन् भन्ने संस्कृतका खोजकर्ताले हजारौं वर्ष अघि नै ज्ञान पाएका थिए । संस्कृतको फिजिक्स यही हो, जुन संसारको अन्य भाषामा हुदैन । एक आकारः एक ध्वनि : एक शब्द । संस्कृत भाषामा ध्वनि प्रमुख अरू गौण हुन्छ ।
विश्वभरि प्रिन्टिंग प्रणाली छापाखानाको आविस्कार भएपछि करिब कूल १३.५ करोड पुस्तक छापिएका छन् । भारत मै सरकारसँग संस्कृतका अप्रकासित पाण्डुलिपी ३.५ करोड छन्, निजी पाण्डुलिपी कति होलान्, अथाह छ । बिदेशमा पनि संस्कृतका पाण्डुलिपी छन् ः युरोपमा ६० हजार र दक्षिण एसियामा १.५ लाख जति रहेका छन् भनिन्छ । नेपालमा पनि ८ लाख छन् । बिदेशी अतिक्रमणकारी र हिन्दूईतर धर्मान्धहरूले संस्कृतका करोडौं पा‘डुलिपी र पुस्तक ध्वस्त गर्दागर्दै पनि अहिलेसम्म यतिका पत्ता लागेको छ । यी सबै प्रकाशित र अनुवादित हुने हो भने मानवजातिले संस्कृत ज्ञानरूपी समुद्रको कति लाभ लिनेछन् कति !
जग कमजोर भएको घर वा संरचना कस्तो हुन्छ ? जग कमजोर बनाइयो भने के हुन्छ ? हाम्रो भाषा संस्कृति, ज्ञान, कला, विज्ञान, पर्व, संस्कार, न्याय र शासन व्यवस्थाका जग संस्कृत भाषा र साहित्य हुन्, जननी हो । यो जग कमजोर हुदा हामी बलियो हुन कसरी सक्छौं ! हामीलाई कमजोर बनाउने शत्रु अरू कोही हैनन्, ती त संस्कृतको अथाह बैभव र सम्पदालाई हेय दृष्टिले हेर्ने बिरोध गर्नेहरू हुन् । ती पराया हैनन्, परायाका चंगुलमा जानी नजानी फसेका वा ब्रेनवास गरिएका वा प्रलोभनमा परेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने स्वजातीय नै हुन् । जरालाई रेट्नेहरू जराबिहीन हुन्छन् र जराबिहीनहरू कहिले सम्मानित, सक्षम र गौरवान्वित हुन सक्दैनन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्